Waddani iyo UCID oo kala qeybsaday xilalka maayarada – Yaa la siiyey duqa Hargeysa? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waddani iyo UCID oo kala qeybsaday xilalka maayarada – Yaa la siiyey duqa Hargeysa?
June 12, 2021 at 11:55 Waddani iyo UCID oo kala qeybsaday xilalka maayarada – Yaa la siiyey duqa Hargeysa?2021-06-12T11:55:13+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Feysal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga UCID oo la hadlayey Wariyeyaasha ayaa shaaca ka qaaday inay doorashada ka hiore mucaaradka heshiis ka gaareen awood qeybsiga siyaasadeed ee Somaliland, isla-markaana lagu heshiisyey in Maayarka Hargeysa la siiyo UCID, halka guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somlailand loo daayey xisbiga Waddani.
“Korsigan horta Maayarka sida madaxweynayaasha looma doorto ee xisbi ayuu ka soo baxaa marka axsaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya Maayarka iyo Maayar ku xigeenka,” ayuu yiri guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee UCID.
Waa kale oo uu intaasi kusii daray “Cabdikariin Axme Mooge Aabihiis ayaan saaxibo aheyn ilaahey ha u naxariistee waa inankeygii ayuu taagan yahay saaxibno waa aheyn marka uu ku jiray ololaha doorashada oo hore ayaan u taageeray,”.
The post Waddani iyo UCID oo kala qeybsaday xilalka maayarada – Yaa la siiyey duqa Hargeysa? appeared first on Caasimada Online.
« Qatar oo Jabuuti Ka Caawinaysa Dhanka Waxbarashada
Kooxda Barcelona oo Weeraryahankeeda Ousmane Dembele u sheegi doonta inuu isaga tago haddii… »